Rafa Melero. Kubvunzana nemunyori weChipatimendi Chiitiko | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Rafa Melero. Twitter nhoroondo.
Rafa melero yakapa basa idzva gore rino uye zita rayo ndere Side maitiro. Pashure Hasha dzePenieni, Kutendeuka kwaBishop, Chakavanzika chiri muna Sasha o Zvakakwana, munyori weBarcelona anodzoka nenziyo yekwaya. Muizvi indavhiyu Iye anotiudza nezvazvo uye zvimwe zvakawanda, sevanyori vaanofarira, maitiro ake semunyori kana ake anotevera mapurojekiti. Ndinonyatsokoshesa nguva yako uye mutsa kundichengeta pamazuva ano ekuzorora.
Rafa melero ziva jira dema. Akazvarwa muBarcelona, ​​asi akapedza hudiki hwake muLleida. Akabva apinda mumuviri we Mossos d'Esquadra uye akashanda muFigueras, Lérida, Hospitalet de Llobregat kana Tarrasa, pakati pemamwe maguta. Yake yese yehunyanzvi basa rave riri mu mapurisa ekutonga, mumapoka akaita seHomicides, Veruzhinji Hutano kana Mhosva dzinopesana neNhaka.
En Side maitiro inopa nyaya inotarisa hunhu hwe Thomas Montes, ane hupenyu hwakanyarara anotora 180 degree anotendeuka riini Kufa kwababa vake inokonzeresa zviitiko zvine mhedzisiro inozokutungamira kuti uite sarudzo: kubhadharwa kutsiva, chero zvazvinotora.
BHUKU TODAY: Yako yazvino nyowani ine musoro unoti Chibvumirano chekuita. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
RAFA MELERO: Iyo pfungwa yakauya makore apfuura. Pandakashanyira chitsuwa cheKoh Samuy, muThailand, ndaifarira kuziva kuti sei uye nei vamwe vagari veSpain vaigarako. Kufungidzira mamiriro ezvinhu aive avatungamira kusiya dzimba dzavo ndokuzopedzisira vari munzvimbo iyoyo vachimhanyisa bhizimusi yaive yekutanga mbeu yeruzivo. Izvo zvaive muna 2014 uye zvakanditorera makore mashoma kuti ndibatanidze mhinduro idzodzo, uye dzimwe, munoverengeka.
RM: Ini handirangariri yekutanga zvakanaka, asi yekutanga iyo yandaifara nezvayo semwana Nyaya isingaperirakanyorwa naMichael Ende. Yangu yekutanga nyaya yakanyorwa yaive yakananga yangu yekutanga novel, Kutsamwa kwePoenix.
RM: Ndakave nezvakawanda, asi pasina kupokana Lorenzo Silva, uye pane imwe nguva Ken Follet.
RM: James Bond, kana Jason Bourne.
RM: Kwete, ndaive navo, ndinobvuma, kuti kana kunyarara, enda kunzvimbo yakanyarara, izvo zvinhu, asi sekuve kwandakaita nemhuri nevana ivo vanyangarika. Iye zvino ndaigona kunyora ndichigadzira ruoko.
RM: Ndanyora zvitsauko pamusoro pezvitima, ndege uye pane imwe nguva ndichirara nemwanakomana wangu mumaoko angu saka ndinokuudza kunenge chero nguva nguva yaanondipa kuti ndiite.
RM: Hongu, inonakidza uye musori. Bhuku randinofarira nderinoti Iyo Dante equation naJane Jensen.
RM: Iri sango rakakura, naNoemí Trujillo uye kuverenga zvekare Moyo weRima naJoseph Conrad.
Ndiri kupedzisa kunyorwa kwenyaya yechina mune iyo Xavi Masip saga.
RM: Zvakaoma kuve nekuonekwa kana usiri mune hombe yekutsikisa imba, asi pakupedzisira, mune yangu zvirinani, ichi chiito chekutandarira uye ndine nguva huru yekunyora.
RM: Kune nguva dzose pane chimwe chinhu chinodzidziswa kubva pane zvese zvakaitika muhupenyu, asi izvozvi handina kana basa nekunyora nezve denda iri. Ndiri kuenda kuburikidza nayo sevamwe vese, kunyangwe nekuda kwehunyanzvi hwangu zvishoma kubva mukati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Rafa Melero. Kubvunzana nemunyori weChipatimendi Chekuita